Ngaphambi kokuba ngichaze ukuthi ukususa kukakhokho sulfuric , masizame ukuqonda ukuthi yini ngempela ngokuvamile oyikho nalokho, eqinisweni, kuyingozi ngakho ekhaya. Igama elisemthethweni cerumen - «cerumen». Kalula nje, yingoba kuyinto into siqukethe yangaphandle indlebe nezindlala uketshezi, kanye izinhlayiya keratinized epithelium. umbala wayo zingaba phakathi yellow ugodo ukuba nsundu, kane - kusuka soft futhi plastic kanzima njengoba itshe. Kungani kubalulekile ukwazi ukuthi ukususa kukakhokho sulfuric? Inkinga iwukuthi sulphur angase buthelela endlebeni futhi ekugcineni ukuvimba komsele indlebe. Ngokwemvelo, ukuthi endlebeni yomuntu ngesikhathi esifanayo kakhulu liwohloka. Iziguli eziningi beze udokotela e isidumo, sicabange okubi kakhulu isifo kuze kube ukuthi unesimila ebuchosheni, kodwa kuvela ukuthi yonke le nto in ezivamile earwax.
Indlela ukususa ipulaki sulfuric ekhaya? Futhi ifeza zavelaphi? Imibuzo enjalo kufanele ulalele odokotela bavame kakhulu. Ake sixoxe konke ukuze. Njengoba khumbula izifundo esikoleni biology, indlebe yomuntu yakhiwa izingxenye ezimbili ezixhunywe isiqeshana isiteshi emincane. Ukusebenzisa intandokazi yabo bonke swabs ukotini ngokuvamile kuholela yokuthi sulphur is akakhishwanga endlebeni, noHezekeli - is okhandwe ngesando ujule isiteshi. Nokho, zikhona nezinye izizathu. Ngakho ungenawo ukuba bazibuze ukuthi ukususa ipulaki sulfuric ekhaya, kuyazuzisa sokumazi nabo.
Okokuqala, isici ayeke ukunisa ngokuvamile amanzi Ufika endlebeni - sibonga sulphur wakhe nakakhulu - kangangokuthi kungaba ngokugcwele noma ingxenye ukuvimba komsele indlebe. Okwesibili, bazolokhu wena kokukhipha sulphur, bazolokhu ukuthi likhiqizwa (ngokuthi uketshezi lenyuke). Okwesithathu, ukwakheka cerumen ikhuthaza khona njalo endaweni enothuli - yingakho kubalulekile ukuba yokuhlanza njalo ezimanzi.
Ufuna ukwazi ukuthi ukususa i-plug-sulfuric ekhaya? Ukuze wenze lokhu, kudingeka wazi izimpawu, kubonakala. The main isici ukutholakala tube endlebeni is ukulahlekelwa kukuzwa. Ngaphezu kwalokho, umuntu angase abe ukhathazekile umuzwa ukugcwala. Ezinye iziguli bakhononda ngokuthi izwi labo lizwakale kwekhanda labo. Ukuhlupheka eardrum kubangela inzululwane njalo futhi isifiso equlekile yomuntu ukhwehlele yakhe.
Ngakho, lapha sifika iphuzu. Indlela ngesandla ukususa kukakhokho sulfuric? Ukuze wenze lokhu udinga isixazululo ezibuthakathaka i-hydrogen peroxide. Bury ke endlebeni izikhathi eziningana ngosuku - lokhu kuzosiza ukuthambisa isibabule lula ukuba kususwe. Kuhle kakhulu usizo ukugeza (ungasebenzisi amanzi, ngisho abilisiwe - Buy lencono nosawoti ekhemisi). Indlebe is siyakazwe isipetu noma UJanet isipetu elula. Uma tube ekugcineni ngayisusa, kahle sula indlebe.
Kunenye indlela ephumelela, Masters othandekayo. umunwe kancane wetted ngamanzi ufake umsele indlebe uphinde uphendule izikhathi ezimbalwa; esiqongweni salesi kufanele sithambekele ekubeni sivele uhlangothi. Kubalulekile futhi ukusebenzisa amanzi epholile okugeza - hot ithuthukisa uketshezi. Uma kuphelile, kunengqondo ukwenza ukusetshenziswa indlebe eqeda ukuvuvukala lehla - bona abulale ukutheleleka.
Ukuze uvimbele kabusha okwenziwe ukuminyana, bagcine inhlanzeko esikhathini esizayo. Gwema ukubhukuda emanzini abandayo kakhulu. Ngemva ukugeza ngamunye kahle ome ezindlebeni, qiniseka ukuthi kwakungekho iminonjana kancane umswakama. Futhi okubaluleke - konke senqabe ukusetshenziswa swabs ukotini! Bathi nje babhebhethekisa lesi simo. Uma uhlangabezana nanoma yiziphi izinkinga ezindlebeni, isibonelo, imbobo eardrum, inqubo yokuhlanza kungase kwenziwe kuphela izisebenzi eziqeqeshiwe.
Rumour: yokutakula ne sensorineural ubuthulu, ngemva abezindaba otitis, ezinganeni emva kokuhlinzwa
Sulphur ezindlebeni - inkinga noma kuyinsakavukela?
Izifo indlebe zabantu: Izimpawu kanye Ukwelashwa
Cerumen endlebeni - yini okumele uyenze futhi kanjani ayibulale?
Otomycosis: ngemithi kanye amakhambi abantu
Machines GTA 4 nge ukufakwa okuzenzakalelayo - imfashini friendly
Indlela yokukhetha umtholi webala laser. I-range finder laser: imininingwane kanye nokubuyekezwa
ORKSE: sokuqonda nencazelo efanele izifinyezo
U-Aliya Izetbegovic, uMongameli waseBosnia neHerzegovina: biography
Izinhlobo indle. Bristol sezinyawo Scale